रुपा सुनारलाई कारबाहीको माग गर्दै , घरबेटी सरस्वती प्रधानले दिइन् उजुरी ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/रुपा सुनारलाई कारबाहीको माग गर्दै , घरबेटी सरस्वती प्रधानले दिइन् उजुरी !
रुपा सुनारलाई कारबाहीको माग गर्दै , घरबेटी सरस्वती प्रधानले दिइन् उजुरी !
आफूलाई षड्यन्त्रमूलक ढंगले फसाइएको भन्दै रुपा सुनारमाथि कारबाहीको माग गर्दै सरस्वती प्रधानले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिएकी छन् ।
षड्यन्त्रमूलक ढंगले प्रहरी हिरासतमा थुनाउने रुपा सुनारलाई हदै सम्मको कारबाही गर्नुपर्ने पनि उनले निवदेनमा माग गरेकी छन् । रुपा सुनारसँगै कोठा खोज्न सहयोग गर्ने सुष्मा राई र सिर्जना राईलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ । यसअघि आफू दलित भएको थाहा पाएपछि प्रधानले कोठा नदिएको भन्दै सञ्चारकर्मीसमेत रहेकी सुनारले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । उजुरीका आधारमा पक्राउ परेकी प्रधान ३ दिन थुनामा बसेकी थिइन् ।
थप सामग्री -एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग– पूर्व खेलकुद मन्त्री तथा नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य जगत बहादुर बिश्वकर्माले शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्नु भएको छ ।
एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा नेता विश्वकर्माले मन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्नु भएको हो । उहाँले जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिने काम मन्त्रीबाटै भएको भन्दै तत्काल मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने बताउनु भायो ।
संचारकर्मी रुपा सुनारलाई दलित भएकै कारण कोठा भाडा नदिएको भन्दै उजुरी परेपछि बबरमहलकी घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेकी प्रधानलाई मन्त्री श्रेष्ठले छुटाएर आफू सवार गाडिमा लिएर घर लानुु भएको थियो । त्यसपछि मन्त्री श्रेष्ठको चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले मंगलबार राष्ष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग समक्ष माफी समेत माग्नु भएको थियो ।